Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato hoverboard | Ragga Stylish
Dhaqdhaqaaqa casriga ahi wuxuu isbeddelay habka aan ugu dhaqaaqno qaab aan la qiyaasi karin. Waxaan heli karnaa aalado koronto oo naga caawin kara inaan ku dhex wareegno magaalooyinka iyadoon la isticmaalin gaari noo gaar ah ama gaadiidka dadweynaha. Horumarkaas awgeed waxaan sameyn karnaa safarro annaga oo aan wasakheynin jawiga oo aan gacan ka geysaneyno dhaqdhaqaaqa waara. Maanta waxaan u nimid inaan ka hadalno boodhadhka. Waa qalab koronto ku shaqeeya oo naga caawin kara inaan ku dhaqaaqno laba taayir oo aan u baahnayn inaan gaarigeena u qaadno si aan ugu aadno meelaha ku dhow.
Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa waxa hoverboard-yadaani yihiin, sida ay u shaqeeyaan iyo waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay inay lahaadaan. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato iyaga? Sii wad akhriska maxaa yeelay waxaad awoodi doontaa inaad si fiican u ogaato.
1 Waa maxay hoverboard
2 Sidee hoverboards u shaqeeyaan
3 Kaga deg marki uhoreysay
4 Astaamo noocee ah ayay yeelaneysaa
Waa maxay hoverboard
Maaha wax intaa ka badan oo aan ka yarayn aalad leh laba giraangirood oo leh baytari la soo celin karo oo la qaadi karo oo noo dammaanad qaadaya dhaqdhaqaaq aan lahayn wasakhda hawada. Waxaa loo tixgelin karaa nooc gawaari ah sida baaskiilada korantada. Waxaa lagu xakameeyaa cagaha mahadnaqa qaar ka mid ah dareemayaal ay leedahay. Si aad u awoodo inaad u leexato oo aad u beddesho jihada hadba sida aad rabto, Hoverboard wuxuu leeyahay nidaam isku dhafan oo isku dhafan.
Waxaa lagu yaqaan magaca guud ee mootooyinka korontada laba lugoodleyda ah. Waxa kale oo jira mootooyin leh laba giraangirood laakiin leh bir gacan qabsi ah oo si ballaadhan loogu isticmaalo bedelka baaskiilka caadiga ah ee loogu talagalay dhammaan kuwa aan ku jirin baaskiilka. Sidii mootooyinku u noqdeen kuwo moodo toban sano ama ka badan ka hor, mootooyinka ayaa laga helaa meelo badan oo adduunka ah.
Mid ka mid ah cilladaha ugu waaweyn ayaa ah baahida loo qabo in la barto sida loo isticmaalo loona maareeyo isku dheelitirka si wanaagsan. Waana in qalabkani ay ahaayeen halyeeyadii dhicitaanno badan oo ahaa koorsada ugu muhiimsan ee fiidiyowyo badan oo maad ah adduunka oo dhan. Waa lagama maarmaan in si awood leh loogu xakameeyo dareemayaasha cagaheena si aanan si dhaqso leh ugu dhicin.
Dhanka kale, waxaan helnaa dadka jecel qalabkaan oo yaqaana sida loola macaamilo si fiican oo, sida haddii ay tahay skateboard koronto, waxay la sameeyaan dhammaan noocyada pirouettes iyaga oo dareemaya inay aad ugu raaxeystaan ​​iyaga. Qalabkani waa hadiyado ku habboon dhammaan noocyada dadka u baahan inay safraan oo beddelaya qaab nololeedkooda.
Halkan waxaad ka heli kartaa hoverboard leh dhameystir aad u xiisa badan.
Sidee hoverboards u shaqeeyaan
Tani waa laga yaabaa inay tahay qaybta ugu muhiimsan, maaddaama ay jiraan dad badan oo iibsada iyaga oo aan aqoon u lahayn hawlgalkooda oo aakhirka ka tagaya sidii hal shay oo kale. Qiimuhu runtii kuma sarreeyaan soo iibsashadeeda maantana way fududahay in la helo a hoverboard raqiis ah, laakiin waa wax laga xumaado in aaladahaasi noqdaan wax ku meel gaadh ah iyo dhammaan qashinka caadiga ah ee ku-meel-gaadhka ah ama hawraar aan macno lahayn.
Marka ugu horeysa ee aad fuusho hoverboard, waxaad u malayn doontaa inaad isla markiiba dhici doontid. Waxay u badan tahay waxa dhaca. Sidaa darteed, hubi inaad haysato qof kuu dhow ama xoogaa taageero ah si uusan jugtu u xoog badnayn ama aad isaga ilaaliso. Sidoo kale waxaa badanaa loo maleeyaa in isla marka aad fuusho oo aad dhacdo aad jebin doontid. Oo halkaas ayaan ku arki karnaa iyada oo leh naqshad sidan u qurux badan, oo aan lahayn wax xoqan, oo leh dhammaystir dhammaystiran iyo, dabcan, macno malahan inaad dul degto oo aad qasan sameyso. Si kastaba ha noqotee, ha ka welwelin maxaa yeelay qalabkan waxay horeyba u yimaadeen iyagoo diyaar garoobaya inay iska caabiyaan nabarrada mid ka mid ah kuwa cusub uguna adkaysta geeddi-socodka oo dhan ee ku lug leh la-qabsiga iyo barashada ilaalinta dheelitirka.
Kaga deg marki uhoreysay
Khiyaanada loo maro hoverboard-ka markii ugu horreysay ayaa ah inaan ku xakameynno taabashada fudud ee cagaha horay iyo gadaal. Waxa ugu badan ee lagula taliyo waa inaad u fuusho sidii inaad isku dayeyso inaad fuusho jaranjarooyinka qaarkood. Ha ka baqin. Tilmaam wax ku ool ah ayaa ah ku isticmaal markii ugu horreysay hoolka guriga iyo inaad awood u yeelatid inaad gacmaha saarto derbiyada oo aad yeelato amaan dheeraad ah.
Sida ugu fiican ee loo maro qadka toosan waa in laga fekero jihada aad rabto inaad u socoto. Waa xilligaas in jirkaagu si otomaatig ah ugu tiirsanaan doono jihada aad rabto inaad u socoto. Hoverboard wuxuu helaa kicinta cagahaaga iyo isu dheelitirka jirkaaga si loo ogaado inay tahay inuu u dhaqaaqo jiho qaas ah. Waa wax caadi ah in waqtiyada ugu horreeya ee ay sidan wax badan ku kacaan oo aannu ku dhammaano inaan iska dhiibno, laakiin waa wax iska caadi ah, aakhirka waxay ku dhammaataa helitaankiisa oo runti si fiican ayey u shaqaysaa
Waxaa jira dad badan oo boodaya. Halkani waa halka ay ka khaldamaan. Si aad uga degto hoverboard waa inaad sameysaa isla wixii aad ku fuushay. Taasi waa, marka hore mid lug ah ka dibna mid kale. Haddii aan isku dayno inaan hoos u boodno, waxaan la kulmi doonnaa khatar weyn oo ah inaan ku dhicno oo aan waxyeelo u geyno qalabka.
Astaamo noocee ah ayay yeelaneysaa
Marka aan dooneyno inaan sameyno iibinta hoverboardkeena waa inaan hubinno inuu leeyahay astaamo cayiman oo damaanad qaadaya inuu leeyahay tayo aad u wanaagsan. Waxa ugu horreeya ee aan u baahannahay inaan xoogga saarno waa awood iyo xawaare. Tani waxay kuxirantahay gebi ahaanba isticmaalka aan rabno inaan siino. Hadday tahay madadaalo saafi ah waa inaannaan ahmiyad aad u weyn siinin aaladda leh awood badan. Si kastaba ha noqotee, haddii aan u isticmaalno gaadiid ahaan, waa inaan aragnaa kuwa xawaaraha badan leh. Waxaa jira iyaga oo leh xawaaraha ugu badan ee 8 km / saacaddii iyo ilaa 25 km / saacaddii.
Dhinac kale waa ismaamul. Labada astaamood ayaa wadaaga nooca isticmaalka aad siin doontid. Haddii ay tahay adeegsi firaaqo oo dhammaystiran, uma baahan doonno hoverboard leh madax-bannaani badan. Si kastaba ha noqotee, si aan ugu wareegno waxaan u baahan doonnaa si aan u yeelano awood ku filan oo aan ku safri karno kiiloomitir iyadoo aanu baterigu naga dhammaan. Si aad u dhaqaaqdo, moodel fudud sida midka ayaa lagula talinayaa. Wax alaab ah lama helin. unisex oo ay ku jiraan boorso qaadis.
Waa inaan si dhow u eegnaa dammaanadda si aan u ogaanno goorta aan soo celin karno ama dabooli karno khasaaraha. Waxa ugu fiican ee la sameeyo waa inaad ugu yaraan 2 jir noqotid. Sidoo kale hubi inay haysato shahaado nabadgelyo oo caalami ah sida CE iyo Rohs.
Ugu dambeyntiina, waa ku habboon tahay in la iibsado kuwa haysta Bluetooth si ay ugu xiraan moobaylka oo ay leeyihiin waddooyin, xawaare ama xitaa muusig iyada oo loo marayo ku hadla gudaha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto waxyaabo badan oo ku saabsan hoverboards iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato hoverboards